Miyay Tahay Calaamaduhu Inay Mawqif Ka Taagaan Arrimaha Bulshada? | Martech Zone
Miyay Tahay Calaamaduhu Inay Mawqif Ka Taagaan Arrimaha Bulshada?
Khamiis, May 25, 2017 Khamiis, May 25, 2017 Douglas Karr
Subaxaan, waxaan raacay astaan ​​ku taal Facebook. Sanadkii la soo dhaafey, cusbooneysiintooda ayaa isku badashay weeraro siyaasadeed, mar dambena ma aanan dooneynin inaan arko diidmadaas quudkeyga. Muddo dhowr sano ah, waxaan si furan ula wadaagay aragtidayda siyaasadeed. sidoo kale. Waxaan daawaday sida aan u raacayo dadkale oo isu beddelay dad badan oo ila oggolaaday halka kuwa kale oo aan oggolayn la raacay oo lumiyay xidhiidhkaygii.
Waxaan goobjoog u ahaa shirkado aan damacsanaa oo ka guuraya inay ila shaqeeyaan, halka noocyada kale ay sii ballaadhiyeen ballamihii ay ila galeen. Markaad tan ogtahay, waad la yaabi doontaa inaad ogaato inaan beddelay fekerkayga iyo istiraatiijiyadeyda. Intabadan isdhexgalka bulshada ee aan daabacay hada waa kuwo dhiirrigelin leh oo laxiriira warshadaha halkii ay ka ahaan lahaayeen bulsho iyo siyaasad ahaanba. Sababta Hagaag, sababo dhawr ah awgood:
Waan ixtiraamayaa kuwa leh aragtiyo beddel ah mana doonayo inaan ka riixo.
Waxa aan aaminsanahay shaqsiyan saameyn kuma yeesho sida aan ula dhaqmo kuwa aan u adeegayo… marka maxaan ugu ogolaanayaa inay saameyn ku yeelato ganacsigayga
Waxba ma xallin marka laga reebo inay ballaariso farqiga halkii ay ka ahaan lahayd buundooyinka.
Is-afgaranwaaga ixtiraamka leh ee arrimaha bulshada ayaa ku dhintey baraha bulshada. Astaamaha ayaa hadda lagu habeeyay weerarro naxdin leh waana la qaadacay markii mowqif kasta la muujiyo ama xitaa ay dadku u arkaan. Xaqiiqdii difaac kasta ama dood kastaaba waxay si dhakhso leh ugu degtaa isbarbardhiga xasuuqa ama magac kale u yeerista. Laakiin miyaan qaldanahay? Xogtaani waxay muujineysaa xoogaa aragti ah in macaamiil badan aysan ku raacsaneyn oo ay aaminsan yihiin in noocyo badan ay noqdaan kuwo sax ah oo si cad u qaata arrimaha bulshada.
Havas Paris / Paris Retail Week Shopper Observer wuxuu kashifay seddex isbeddel oo ka dhex muuqday isbeddelka xiriirka u dhexeeya noocyada iyo macaamiisha Faransiiska:
Macaamiisha ayaa rumaysan inay hadda tahay waajibaadka summad in mowqif laga qaato arrimaha bulshada.
Macaamiisha ayaa raba inay noqdaan shaqsi ahaan loo abaal mariyey calaamadaha ay ku shaqeeyaan.
Macaamiisha ayaa dalbanaya in alaabada la helo labadaba khadka tooska ah iyo khadka tooska ah.
Waxaa laga yaabaa in ra'yigeygu ka duwan yahay maxaa yeelay waxaan ku dhowdahay konton jir. Waxay ila tahay in khilaaf ka jiro xogta meesha kaliya seddex meelood meel ka mid ah macaamiisha ay rabaan magacyada inay helaan siyaasad inkasta oo ku dhowaad arin kasta oo bulsheed oo isu rogeysa kubad siyaasadeed. Si aad ah uma hubo in aan doonayo in aan gacan ka geysto astaan ​​si cad u qaddarinaysa mowqifkeeda arrimaha bulshada. Iyo maxaa laga yeelayaa mowqifka bulshada ee muranka dhaliyay ee kala qaybiya saldhigga macaamiisha? Waxaan u maleynayaa in bayaanka ugu horeeya laga yaabo inuu u baahdo in dib loo qoro:
Macaamiisha ayaa rumeysan in hadda ay tahay waajibaadka summaddu inay mowqif ka qaataan arrimaha bulshada… illaa iyo inta ay calaamaddu ku habboon tahay macaamilka sida loo horumarinayo bulshada.
Wax dhibaato ah kuma qabo shirkad kasta oo si gaar ah u taageerto arrimaha bulshada, laakiin ma caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay haddii riixitaanka calaamadaha inay qaataan mowqifka loo isticmaali doono in lagu abaalmariyo ama lagu ciqaabo dhaqaale ahaan aragtidooda. Inta badan arrimaha bulshada waa kuwo shaqsiyeed, oo aan ujeeddo laga lahayn. Tani aniga igama muuqato horumar - waxay umuuqataa inay tahay xoogsheegasho. Ma doonayo in ay igu qasbaan macaamiishaydu in aan mawqif ka qaato, oo aan shaqaaleeyo kuwa aniga kaliya igu raacsan, oo aan u adeego oo keliya kuwa u fikiraya sida aniga oo kale.
Waan ku qanacsanahay kala duwanaanta ra'yiga halkii aan ka fikiri lahaa koox-koox. Waxaan aaminsanahay rajada, macaamiisha, iyo macaamiisha inay wali rabaan oo ay u baahan yihiin taabasho bini aadam halkii ay ka ahaan lahayd mid otomaatig ah, waxayna rabaan in si shaqsiyan loo abaalmariyo oo loo aqoonsado astaamahaas ay ku qarashgareeyaan doolarkooda adag.
Marka, ma mowqifkeyga ayaan ka qaadanayaa arrintan muranka badan dhalisay?
Daraasadda Goobjoogaha Dukaanka, Inta udhaxeysa AI iyo siyaasada, muhiimada ay leedahay cunsuriyada aadanaha ee macaamiisha, waxaa qabtay Paris Teta Week oo lala kaashanayo Havas Paris.
Tags: brandbrandingekspertenHavas Parisiibinta qad la'aantaParis Tafaariiq Tukaan dukaameystesiyaasaddadukaamada tafaariiqdadukaamada tafaariiqdadukaanoabaalgudyoarrimaha bulshadamowqifka bulshada
The 12 Brand Archetypes: Kee baad Tahay?
Muuqaal kooban oo ku saabsan Habdhaqanka Iibsiga Macaamiisha ee Omnichannel
May 25, 2017 at 2: 08 PM
Sida caadiga. Dhibco wanaagsan. Waan ku raacsanahay, qoraalkaaga wax laga beddelay ee macmiilku doonayo. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in noocyo badan ugu yaraan si cad loogu ciqaabi doono mowqifyadooda, laakiin doolarka ayaa laga yaabaa inay ku taageeraan iyaga oo adeegsanaya macaamiil dheeri ah oo iyaga si gaar ah ula heshiiya.
May 30, 2017 at 12: 09 PM
Laba bayaan oo muhiim ah oo ka mid ah maqaalkaaga oo soo koobaya waxa aan ka qabo mawduuca, "Inta badan arrimaha bulshada waa kuwo shaqsi ah, oo aan ujeeddo lahayn" & "Waan ku faraxsanahay kala duwanaanshaha ra'yiga halkii aan ka fikiri lahaa koox-koox". Waxaan u maleynayaa in inta badan kuwa sidaas u kala jabay aysan fahmin in ra'yigooda uu si sax ah u yahay, ra'yi, mana dhageysan karaan ama ma dhagaysan doonaan fikradaha kale si loo balaariyo aragtidooda. Waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay in shirkadna aysan si cad u riixin mowqifkooda ku saabsan arrimahan, ama ay dhab ahaan wajihi doonaan dhabar jab labada dhinacba. Ka shirkad ahaan waxaan sheegi lahaa inaan haysto shaqaale kala aragti duwan oo mowqifyo kala duwan leh waxaanan daba taaganahay xorriyadda fikradda waxaanan taageeraa shaqaalaha ka socda dhammaan dhinacyada siyaasadda.